Soo dejisan Banshee 2.4.0 Alpha – Vessoft
Soo dejisan Banshee
Banshee – ciyaaryahanka shaqaysa taas oo ay taageertaa qaabab warbaahinta caanka ah. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u abuuraan Playlists, raadinta files warbaahinta, dhagayso raadiyaha, edit tag, u eegto macluumaadka ku saabsan faylasha iwm Banshee taageertaa .Wadashaqayntaas la Qalabka telefoonada gacanta ku saleysan oo ka hawlgala macruufka iyo Android nidaamyada. Software The falgala adeegyada caansan sida Amazon, Lastfm iyo Miro Guide. Banshee kale oo aad ku ballaarinta fursadaha by xira daro kala duwan.
Support of qaabab warbaahinta caan ah
Awoodda in ay dhegeystaan ​​idaacadaha iyo Podcasts
.Wadashaqayntaas La Qalabka telefoonada gacanta
Dhexgalka adeegyada loogu jecel yahay
Banshee Software la xiriira:
English, Español, 中文, 日本語... MiKTeX 2.9.6069
العربية, English, Українська, Français... FurMark 1.17